Ubre - Ọkachamara Ndụ Ndụ Ọkachamara - Geofumadas
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ịhazi igwe, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi akpa na usoro ya dị iche iche nke ịme ngosi, nyocha na nsonaazụ nsonaazụ maka usoro ndị ọzọ nke usoro nrụpụta.
Mee ike maka ịme ihe nlere, nyocha, na nkwekorita nke akụkụ mgbakọ. Usoro a gụnyere mmụta nke CREO Parametric, otu n'ime mmemme a kacha eji rụọ ọrụ n'ichepụta ihe; yana iji ngwa ọrụ ejiri usoro ọzụzụ dị otú a mepụtara dịka Inventor Nastran na Ansys workbench. Na mgbakwunye, ọ gụnyere usoro CURA maka nghọta akụkụ 3D obibi akwụkwọ.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaUlo akwukwo ihe omumu nke ndu»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru dị n'itinye ọnụahịa nke Diploma - Ọkachamara Ndụ Ndụ Ngwaahịa
Ogwe ọrụ Ansys ………………………. USD 130.00 24.99
PREMETIC PREMIET CREO ……… .. USD 130.00 24.99
PREMETIC CREO dị elu …… USD 130.00 24.99
Mbipụta 3D ……………………… .. .. USD 130.00 24.99
Onye nchoputa Nastran ………………… .. USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Ubre - BIM ọkachamara ọkachamara
Next Post Gersón Beltrán maka Twingeo 5th mbipụtaNext »